-မြန်မာ့အရေးအာဆီယံအထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပနေချိန် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ အကြမ်းဖက… – PVTV Myanmar
-မြန်မာ့အရေးအာဆီယံအထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပနေချိန် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ အကြမ်းဖက…
-မြန်မာ့အရေးအာဆီယံအထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပနေချိန် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်လူသတ်စစ်ကောင်စီကို ရှုတ်ချကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေက ဦးဆောင်ကျင်းပဆိုတဲ့သတင်း
-မဝေးတော့တဲ့ အချိန်မှာ CDM ဝန်ထမ်းများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်နိုင်သည့်အချိန်ရောက်ပါက ပြည်သူများပိုင်သည့် ရုံး၊ ကျောင်း၊ ဘဏ်၊ ဆေးရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေထဲမှ စစ်ကျွန်တွေ အားလုံးကို မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 2.7K Share – 255
2021-04-24 at 9:12 PM
” NUG ” တိကျတဲ့မဟာဗျူဟာတွေချပြီး မဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ တိုက်ပွဲချီဘို့ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပါဗျ။
2021-04-24 at 9:13 PM
Thidar Win says:
2021-04-24 at 9:17 PM
Ko Thuka says:
Nge Nge Htoo says:
2021-04-24 at 9:21 PM
KNU KIA ပဲအားကိုးတော့မယ် ကျန်တာတွေ အာလူးပဲ💩💩💩
Zaw Min Tun says:
အာစီယံျပည္သူေတြလည္း ညီျကေလျပီ အာဏာရွင္ကုိအေရခြံစုတ္ဖုိ့။
Siam Emerald says:
Try to contact U.S military training.
2021-04-24 at 9:43 PM
NGU ဟာတရားဝင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေထောက်ခံကမ္ဘာကလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါစေ🙏🏻
2021-04-24 at 9:46 PM
PVTV သတင်းကြေငြာတဲ့သူရှင့် အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်လို့ သုံးနှုံန်း ခေါ်ဆိုတာ အရမ်းမှန်ပါကြောင်း လူသတ်သမား လူဆိုးခေါင်းဆောင်လို့လည်း ပြောပေးပါရှင့် ကြည်ညိုစရာ တစ်စက်မှမရှိ သိက္ခာလုံးဝမရှိတဲ့ လူသတ်ကောင်ပါ အရှက်မရှိ သူ့မျက်နှာကို ကမ္ဘာ မြင်အောင်ပြရဲသေးတယ် ရွှံဖို့ကောင်းလိုက်တာ
2021-04-24 at 9:54 PM
ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးက… လူမိုက်သားကိုအဖေများက ဆုံးမလိုက်တဲ့ အဆင့်ပဲရှိတယ်
Źwăt Źwăt says:
2021-04-24 at 9:55 PM
Htinhtin Lin says:
2021-04-24 at 10:15 PM
2021-04-24 at 10:33 PM
အျပင္ထြက္ရင္ အင္တာပိျုကီးလာမယ္ဆို ခုေတာ့….
2021-04-24 at 10:41 PM
2021-04-24 at 10:42 PM
2021-04-24 at 11:09 PM
အချက် (၅) ချက်ပြောတယ်။
2020 Election ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတောင်မပါဘူး။
Lwin Maung Maung Lwin says:
2021-04-24 at 11:21 PM
2021-04-25 at 12:25 AM
NUG. အစိုးရက ဒီနေ့ အာဆီယံ က
ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက် ၅ချက်ကို
ထားတဲ့ အချက် ၅ချက်ဟာ ၊မြန်မာ
ကျေးဇူးတင်ပါသည် ” အင်ဒိုနီးရှားလူထု”
2021-04-25 at 9:10 AM
သည်ကြားထဲမှာ အပြောင်းအလဲ အကြီးကြီး မဖြစ်ဘူးဆိုရင်
CDM တွေဟာ ၆ လ ပိုင်းဆိုတာ မိုင်ကုန်ပဲ
အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေကို CDM ပါ CDM ပါ ဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်
CDM ကို လှူဖို့ပြောရင်ကျတော့ တွန့်သွားတယ်
သည်လကုန်လို့ တော်လှန်ရေး အဆင့်မတက်ဘူး
သည်တိုင်းပဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ CDM ဝန်ထမ်းတွေကလည်း အကုန်ပြန်ဆင်းဖို့ပဲရှိမယ်
Public CDM ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် မေ့နေကြမှာစိုးလို့ပါ
ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်တောင် CDM မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေကို အပြစ်မတင်စေချင်ဘူး
ဘယ်မိဘ မှ ကျောင်းမအပ်
ကျောင်းတွေ ဖွင့်တာဟာ အလကားပါပဲ
တစ်ရုံးရုံးနဲ့ ကျောင်းတွေ အပ်နေဦးမှာပဲ
ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ် မရှိနေရင် CDM ဟာလည်း ကျဆုံးခါနီးနေပါပြီ
ကိုယ်တိုင် လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် လူတိုင်းမှာ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ကျတော်တို့ယုံကြည်တဲ့အစိုးရဟာလည်း လေ လှိုင်းထဲက စာထုတ် အပြောပဲရှိပြီး အလုပ်သက်သေမြန်မြန်မပြနိုင်တဲ့လူအလိုမရှိပါဖူး။ အခုထိun us. Asianအပြောပဲရှိပြီးအလုပ်နဲ့တခါမှသက်သေမပြသေးတဲ့ သူတို့လည်း ဆက်လက်ပြီး အယုံအကြည်မရှိတော့ပါ။ dလကုန်လို့ တော်လှန်ရေး မဖြစ်ရင်ပဲဖစ်ဖြစ် ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းလဲရင် အလုပ်ပြန်ဆင်းတော့မယ်။ ပြည်သူအနေနဲ့cdmလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အကန့်အသတ်ကျော်လွန်သွားပြီ။
ပန္းမို့မို့ ေဇာ္ says:
မအလေတြ ေဇာင္းထလို့မပီးေတာ့ဘူး အလွည့္ျကေတာ့မႏြွဲ့စတမ္းေပါ့
2021-04-25 at 11:37 AM
Soe Soe Oo says:
2021-04-25 at 7:28 PM